Jal-Bultii Ayyaana Irreessaan Wal qabatee Sochiin Wayyaanee Maal Fakkaataa Ture? « QEERROO
Jal-Bultii Ayyaana Irreessaan Wal qabatee Sochiin Wayyaanee Maal Fakkaataa Ture?
September 30, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	1 Comment
Ayyaanota Biyyatti keessatti kabajaman gurguddoon, ayyaana Arafaa, Ayyaana Qillee, Chambalaalaa, Masqala dabalatee ayyaanota gurguddoo biyya impaayera Ethiopia keessaa tokkodha. Ayyaanonni kunneen akka amantaa amantaa mataasaanitti gartuu mootummaaf qaama mootummaa tokkoon utuu hindoorsifamin kabajamanii darbu. Ayyaanni kun hordoftoota amantaaf duudhaa sanaan bifa gammachuu ho’aa qabuu kabajamu. Keessaattuu ayyaanota sanyiin habashaa kabajan uummanni keenya gargaaree isaan faana bu’uun kabajee miidhaksa. Ayyaanota halagaa haalaan ba’ee bifa ollummaan gargaaree kabajuun Oromoo akka jirutti ta’ee ayyaanota Oromoo gargaaraanii kabajuunillee isa guddaadhaa dhavamiinsa isaaf aggaammiin halagaan darbatu, kanan dhaga’erran ijaan arguutti jira.
Ayyaanota Oromoo kamiinuu mootummaan Wayyaanee kabajee hinbeeku jedhamuu nii danda’a. Ayyaanota isaa kana Oromoon dhiibbaa hamaan akka kabajus kan godhu sababaa qabeenyaa uumaamaa qabu akka ta’e namaa gala. Sabaa fii sablammiin kamuu ayyaana isaa bifa nagaaf jaalalaan biyya kabajatu keessatti afaan Qawween diirsifamaa ayyaana mataa keenyaa kabajachuu nuti Qeerroonis dhaqqabnee jirra. Har’a ayyaana Irreechaaf manaa baanee kellaawwaan Oromiyaa mara humnoota Polisii Fedaraalaan qabamee jira. Akka mataa kiyyaatti, bakka 5nittin sakkattaa’ame. Haalli jiru martuu sodaachisuudha. Hidhannoo guutuun qaama hidhatee socho’uuf karaan darbaa hinjiru. Keessattuu magaalota naannoo Finfinnee jiraniif Finfinnee akkasuma magaalota Bushooftuutti dabarsan keessa nagaan darbuun nii ulfaata. Waraqaa eenyummaa nama gaafachuu fii sakattaa hamaa gaggeessaa turani. Hamman kophee kiyya baase sakattaa’amutti gahuun akka natti dhaga’ame himuuf ayyaanota kanneen olii ilaaleen ittuu gubadhe. Ayyaanota Oromoo kana kalandariin biyyaas waan kabaju miti jechuu dandeenya. Ayyaanonni biroon gaafa ayyaaneffaman hanga maallaqa bilbila keessaa qusatannuttillee geenya. Har’agaruu baga geessaniinuu hinjiru. Walumaa gala ayyaanni irreechaa baranaa Humna waraanaan danqaramee gaggeeeffamaa jira.
« SBO: Onkoloolessa 1 bara 2017. Oduu, Saamicha Godina Jimmaatti gaggeeffamaa jirturratti yaada jiraataan naannichaa SBOf laate fi Qophii Haala Yeroo Irratti Fuuleffate.
“Irreecha Milkii Nuu Haa Tahu” Bishooftuu 2017 »
Pingback: Jal-Bultii Ayyaana Irreessaan Wal qabatee Sochiin Wayyaanee Maal Fakkaataa Ture? – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA